Nkpughe 4 You Pụrụ Ikpughe ya na Data Salesforce | Martech Zone
Ha na-ekwu na CRM bara uru naanị dị ka data dị na ya. Ọtụtụ nde ndị ahịa na-eji ya Salesforce, ma ole na ole nwere nghọta siri ike banyere data ha na-adọta, ihe metrik iji tụọ, ebe o si bịa, na ole ha nwere ike ịtụkwasị ya obi. Ka ahịa na-aga n'ihu na-abụwanye data-na-akpata, nke a na-eme ka mkpa ịghọta ihe na-eme n'azụ-azụ na Salesforce, yana ngwaọrụ ndị ọzọ.
Nke a bụ ihe anọ mere ndị ahịa ji achọ ịma data ha n'ime na n'èzí, na igodo iji ghọta data ahụ.
Sochie ndu site na olulu gi
Volumeda ndu bụ otu n'ime usoro ziri ezi, yana metrik mbụ ọ bụla marketer kwesịrị ile anya. Mpịakọta na-agwa gị ọnụọgụ ole nke ndu ndị ahịa (na ngalaba ndị ọzọ) mepụtara. Ọ na-enyekwa gị uche maka ma ị nwere ike kụrụ ihe mgbaru ọsọ gị maka ịjụ ajụjụ, ịre ahịa ruru eru (MQL), yana azụmahịa emechiri.
Nwere ike soro ọnụọgụ olu na Salesforce site na ịtọ akụkọ iji soro mpịakọta gị site na ọkwa ọ bụla, wee debe dashboard iji jiri data ahụ mara. Ga-enwe ike ịhụ olu ndekọ nke mechara nweta ọkwa nke ọ bụla.
Jiri oke onu mmiri gi iji gbakọọ ọnụego mgbanwe gị n'etiti ọkwa
Dị ka ndị ndu na-agagharị na olulu ahụ, ọ dị mkpa ịghọta otu esi agbanwe site na ọkwa ruo n'ọzọ. Nke a na - enyere gị aka ịghọta etu mmemme mmemme si aga n’ihu n’ahịa ahịa, yana ịchọpụta ebe nsogbu dị (ntụgharị ntụgharị dị ala site n’otu ogbo gaa na nke ọzọ). Ngụkọta a na-enye nghọta karịa ọnụọgụ ọnụọgụ n'ihi na ọ na-ekpughe ụdị mkpọsa nwere ọnụego nnabata ahịa kachasị elu ma na-emechi ọnụego dị nso.
Nwere ike iji nghọta ndị a iji melite usoro ahịa gị ma nye ogo dị elu na-eduga na ahịa. O nwere ike isiri gị ike ịgbaso ọnụọgụ ntụgharị na ọkọlọtọ Salesforce, mana ọ bụrụ na ị wulite usoro omenala na akụkọ, ị nwekwara ike iji anya nke uche hụ ha na dashboard. Nchịkọta nchịkọta bụ ezigbo nhọrọ, n'ihi na ha na-enye gị ohere nyocha ma chịkọta akụkọ gị iji hụ ọnụego ntụgharị gị site n'akụkụ dị iche iche.
Oge stampụ ọ bụla nzaghachi ahịa soro funnel ọsọ
Locgba ọsọ bụ ọnụọgụ mgbochi ikpeazụ dị mkpa iji soro. Locgba ọsọ na-egosi gị otu ọsọ ọsọ si aga n'ihu site na ahịa azụmaahịa gị. Ọ na-ekpughe oge ole ịre ahịa gị bụ ma gosipụta nsogbu dị n'etiti usoro. Ọ bụrụ na ị hụ na nke ahụ na-eduga na mkpọsa a kapịrị ọnụ na-ekpuchi mkpọmkpọ ebe maka ogologo oge, nke a nwere ike igosipụta nkwukọrịta, oge nzaghachi nwayọ, ma ọ bụ usoro na-ekwekọghị ekwekọ. Iji ozi a, ndị ahịa nwere ike ịrụ ọrụ iji dozie nsogbu ahụ ma mezie ngwa ngwa na-eduga 'ọganihu site na olulu.
Nwere ike soro ọsọ ọsọ ọsọ na akụkọ Salesforce site na iji ngwa arụmọrụ ndị ọzọ na-ere ahịa, dị ka Gburugburu zuru.
Gaa karịa ọdịnala aka na-emetụ aka ma tụọ mmetụta mgbasa ozi
Ọ bụ ezie na ịnwere ike ịgbaso njirimara mmetụ ikpeazụ aka na Salesforce, ndị na-ere ahịa na-achọkarị nghọta miri emi banyere arụmọrụ nke mkpọsa ha. Ọ dị obere na otu mkpọsa ga-ahụ maka ịmepụta ohere. Ngwa dị ka Mmetụta Mgbasa Ozi zuru ezu na-enyere gị aka inweta data ahịa ka mma site na iji aka dị iche iche na ụdị mmetụta mgbasa ozi dị oke mkpa. Ndị a na-enye gị ohere ịkọwa oke ego ha nwetara maka mkpọsa ọ bụla na ohere ma gosipụta kpọmkwem mkpọsa kachasị emetụta na ịmepụta ohere maka ahịa.
Tags: Attributionolulu mkpọsammetụta mgbasa oziCRMgburugburu gburugburuzuru gburugburu crmfoneelu gbapụrụ ọsọfoneelu oluụlọ nkwonkwo ahịandị ahịaemetụ njirimara